Tarreeffama qajeelfamootaa ,himannoo gatiin duuka bu'ame of keessaa qabu madaali.Faankishiiniin jijjiirraa gatii himannoo faankishinii kanaan darbe waliin walitti dhufeenya qabu deebisa.
Faankishiiniin Jijjiirraa himannoo bitaa gara mirgaa tti maddali, achiin gatii himannoo faankshiniif ramadame deebisa. Yoo himannoo fi gatiin akka cimdiitti kennamuu baate, dogongorri sa'aa darbee ni uumama.
Himannoo:Himannoo madaaluuf barbaadde.
Gatii: Yoo himannoon Dhugaa ta'e, gatii deebisuuf barbaadde.
Fakkeenya armaan gadii keessatti faankshiniin Switch maqaa faankishiniitti darbeef korniyaa mijaa'aa ramada.